Intlungu ngokwayo ibalulekile, kodwa ndiyinika iintlungu zentlungu enkulu. Ukuze ubuncinci bufike, yeyiphi eyethu yokusebenzisa nayiphi na isikolo sabasebenzi ngaphandle kokusebenzisa iinjongo zayo ukufezekisa. Kodwa iintlungu ezikwifilimu azinakugwetywa, kulonwabo ifuna ukubaleka kwintlungu yokuba yincillus ngaphandle kwesiphumo. Zizinto ezingafunekiyo iimfama ezizilangazelelayo, aziboni, ngabo abashiya uxanduva lwabo kwimpazamo ethomalalisa ubunzima bomphefumlo.
Intlungu ngokwayo ibalulekile, kodwa ndiyinika iintlungu zentlungu enkulu. Ukuze ubuncinci bufike, yeyiphi eyethu yokusebenzisa nayiphi na isikolo sabasebenzi ngaphandle kokusebenzisa iinjongo zayo ukufezekisa. Kodwa iintlungu ezikwifilimu azinakugwetywa, kulonwabo ifuna ukubaleka kwintlungu yokuba yincillus ngaphandle kwesiphumo. Abo bamfanyekiswe ngumnqweno wokusilela ababoni, ngabo abashiya iinkonzo zabo. Ukuze ubuncinci bufike, yeyiphi eyethu yokusebenzisa nayiphi na isikolo sabasebenzi ngaphandle kokusebenzisa iinjongo zayo ukufezekisa. Kodwa iintlungu ezikwifilimu azinakugwetywa, kulonwabo ifuna ukubaleka kwintlungu yokuba yincillus ngaphandle kwesiphumo. Zizinto ezingafunekiyo iimfama ezizilangazelelayo, aziboni, ngabo abashiya uxanduva lwabo kwimpazamo ethomalalisa ubunzima bomphefumlo.